Ndingaphumelela njani ngePinterest kunye ne-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndingaphumelela njani ngePinterest kunye ne-Instagram?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 305
Uninzi lweenethiwekhi zentlalo zilungele umanyano wazo omnye komnye ukunika izibonelelo kubasebenzisi be ukuphucula unxibelelwano lwakho, amanyathelo kunye notyelelo. Enkosi kubo bonke aba bathathi-nxaxheba kuyakubakho ukhetho lokufaka igalelo nefuthe, kodwa ngaphezulu kwako konke, ithuba lokusebenzisa ngcono iqonga ngalinye.
Kule meko, iPinterest kunye ne-Instagram zidlala iluncedo kakhulu kodwa ngaphezulu kwako konke, umanyano oluhlala luhleli olunikezela ngezixhobo kubasebenzisi ngamnye ukuba bakwazi ukwenza imisebenzi abayifunayo mihla le. Nangona kunjalo, ukuba ayisetyenziswanga ngomlinganiso, ubukrelekrele kunye neqhinga, umanyano alunakusebenza.
Ngesi sizathu, ngezantsi uya kuba nakho ukujonga zonke izixhobo ezenzelwe inceba zabasebenzisi, ezenzelwe ukuphucula ubomi bemihla ngemihla bomntu ngamnye wabasebenzisi be-Intanethi. Kwakhona, sebenzisa i izimvo nganye ezisingathwa nguPinterest namhlanje kubo bonke abathandi behlabathi ledijithali.
Umdibaniso phakathi kwe-Instagram kunye nePinterest
Ukusukela ubuncinci kwiminyaka emibini eyadlulayo, uPinterest wagqiba kwelokuba enze umanyano oluyimpumelelo phakathi konxibelelwano oluninzi, kubandakanya ne-Instagram ukuphucula amava omsebenzisi. Okwangoku, abanye abenzi benethiwekhi bayayenza ndikwazile ukusebenzisa eli thuba, Kodwa abanye abasazi kakuhle ukuba isicelo sithini.
Ngaba ukhona umntu onokunxibelelana phakathi kwePinterest kunye ne-Instagram?
Umbuzo ongentla unempendulo elula kakhulu kwaye ngu-ewe, hayi kuphela abantu abadityaniswa neakhawunti yenkampani. Ngapha koko, abadali bePinterest bakhuthaza abantu ukuba bafezekise ezi ntlobo zemisebenzi.
Enkosi kuzo zonke izinto ezilungileyo eziphakathi kwezinto ezinokwenzeka phakathi konxibelelwano lwasentlalweni, abantu abaninzi baye bakwazi ukuqhubela phambili ngamashishini abo kunye neeprojekthi kwindawo yonxibelelwano.
Amanyathelo okusebenzisa i-Instagram kunye nePinterest
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, umanyano phakathi kwezi nethiwekhi zimbini luvelise amakhulu amathuba kubasebenzisi. Ubudlelwane phakathi kwezi zimbini kufuneka busetyenziswe kuphela njengesixhobo esifanelekileyo.
Xela omabini amaqonga kuseto
Ukuba ukuPinterest, ungaya kuseto ukuze ufumane iziphumo ezingcono. Ukusuka apho, abasebenzisi banako unokufumana iziphumo ezingcono xa usabelana ngezikhonkwane kunye / okanye upapasho.
Kuba ukuwo omabini amaqonga, kufuneka ukhumbule ukuba abasebenzisi nganye bajonge izinto ezahlukeneyo, ngenxa yoko izicwangciso kufuneka zahlukile. Ngenxa yoku, umbono olungileyo kukuba ukwazi ukwabelana ngolwazi kuzo zombini kodwa ngeendlela ezahlukeneyo zokujongaNdiyabulela koku, kunokwenzeka ukuba unike indlela yokwahluka kwengcinga.
Musa ukukopisha umxholo
Kwimeko apho uqala nje, enye yezona zimvo zibalaseleyo kukudibana nabanye abadali bokuqukethwe. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uphephe ngokupheleleyo ukuba umxholo wabasebenzisi kuba iya kuvelisa ukuthandabuza kwicala labasebenzisi be-Intanethi abahlala betyelela iprofayile yakho.
Musa ukuba ngqongqo
Iimbono zokwabelana ngomxholo oluncedo zilungile, kodwa zikwanjalo nezo zikwenza uhleke. Ke ngoko, umbono olungileyo ngulo guqula izithuba zibe ziintlekisa ezinokufumana ingqalelo yabantu.
1 Umdibaniso phakathi kwe-Instagram kunye nePinterest
1.1 Ngaba ukhona umntu onokunxibelelana phakathi kwePinterest kunye ne-Instagram?
2 Amanyathelo okusebenzisa i-Instagram kunye nePinterest
2.1 Xela omabini amaqonga kuseto
2.2 Nxibelelana noluntu
2.3 Musa ukukopisha umxholo
2.4 Musa ukuba ngqongqo
Uyenza njani iprofayili kwiPinterest?
Uyenza njani inguqu kwiakhawunti yePinterest?